Dhageyso: Sidee Ayay Jabuuti Isugu Badashay Caasimadda Jawaasiista.(Warbixin ) – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Dhageyso: Sidee Ayay Jabuuti Isugu Badashay Caasimadda Jawaasiista.(Warbixin )
Last updated Jun 21, 2022 290 0
Wargeyska daily telegraph ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa dhawaan warbixin ka qoray dalka Djinouti, taas oo u ku sheegay in magala madaxda dalkan ay hoy iyo gabaad u noqotay Jawasista caalamka, maadama ay quwadaha caalamka loolan adag ugu jiraan sidii ay Jabuuti ugu yeelan galan gal xoogan, waxaana dagaal qarsoodi ah uu ku dhex maraya Mareykanka iyo Dowlada Yurub oo dhinac ah iyo Shiinaha oo daanta kale taagan.
Hadaba side dalkani ku noqday caasimada Jawasista, maxaanse ka naqan Jabuuti taarkh ahaan, intee ayayse la egtahay ahmiyada uu u leeyahay quwadaha caalamka, dhaman arimahas ayaan ku faafaahin doona warbixintena.
Jabuuti waa dal yar oo African ah, sidoo kalena katirsan Jaamacada Carabta, wuxuuna isku xira bariga qaarada Africa iyo Mandiqada bariga dhexe, wuxuuna kaabiga ku hayaa Marin biyoodka caalamiga ah ee Baabul Mandab, halka sidoo kale uu Albaab u yahy Kanaalka Suweys, kaas oo lagu tiriyo mid kamid ah dariiqyada ugu isticmalka badan dhanka bada, halkaas oo ay ka gudban %18 marakibta shixnadaha qaada ee isaga kala goosha badaha caalamka.
Masaxo ahan dalkan wuxuu ku fadhiya 23kun oo KM oo qura, dadkiisana waxaa tiro ahaan lagu qiyaasaya 942kun oo qof, qowmiyadaha dago Jabuuti ayaana u qeybsan laba qolo, kuwaas oo kala ah Ciise oo asal ahan kasoo jeeda Somalida, iyo Qowmiyada Cafarta oo asal ahaan kasoo jeeda dhulka Xabashida, gaar ahaana dalka Ethiopia, Diinta Islaamka ayaana ah mida asalka ah ee ay heystan dadka ku dhaqan wadankasi, waxaana xusid mudan, in Luuqada Faransiiska ay thy mida looga hadlo, inkastoo badana dadku ay sidoo kale ku hadlan luuqadaha carabiga iyo Somaliga.
Dekedaha caalamiga ah ee u leeyahay dalkan ayaa ah halbowlaha dhaqaale ee ay ku tiirsan yihin bulshada reer Jabuuti, %90 dhaqalaha gudaha iyo Shaqooyinka la qabto ayaana ku xiran, maadama inta badan dalka uu yhy dhul Saxara ah oo aan ku habooneyn beerashada, halka intiisa kalena uu yahy buraley, taas oo ay adag thy in wax lagu beerto.
Jabuuti waxa uu dhaca bartamaha mandiqado ay ka taagan thy qalalaso dagaal, kuwaas oo kala ah bariga Africa iyo mandiqada bariga dhexe, balse amni ahaan waa uu ka duwan yhy dalalka kale, taas ayaana siisay ahmiyad gaar ah, waana mida ka yeshay in qaar katirsan dowladaha ugu awoda badan caalamka ay saldhigyo military ka sameystan, sida Mareykanka, SHiinaha, Japan iyo Faransiiska, inkastoo xukumada Ismacil cumar geele ay dhaqale fara badan ka qaadato.
Faransiiska ayaa wujuud ciidan oo weyn ku leh, magalada Djibouti oo ah caasimada wadankaasi, maadama ay horey ugu heysan jirtay gumeysi cad, ilaa hadana ay ku heysato mid dadban, sidoo kalena waxaa dalkan ku yaala Saldhiga Limone oo ah midka ugu balaran ee Mareykanku ku leeyahy guud ahaanba Africa, halka SHiinahana u uku leeyahay saldhiga kale ee xukumada Bejin ay ka sameystay meel ka baxsan dalkeda, taas oo ay sii dhertahay Japan oo Dhawan ka furatay saldhigi ugu horeyey oo ay dunida ku yeelato tan iyo marki uu so dhamaday dagalki 2aad ee dhex maray gaalada caalamka.
Sidoo kale dalkan ayaa ah Albaabka ganacsi ee ugu balaaran ee Ethiopia ku xira wadamada calamka, inta badan badecadaha loo iib geeyo Ethiopia ayaana kasoo daga dekedaha ku yaala wadanka Djibouti, waxaana jiro heshisyo ganacsi oo ay horey ukala saxixden labada dhinac.
Tarikh ahaan sanadki 1977di ayuu dalkani xurnimadisa ka qaatay gumeystihi faransiiska, gobolada ay dagan qowmiyadaha cafarta iyo Ciise ayaana ku midoobay dowladi la dhisay xiligas, taas oo uu madaxweyne ka ahaa Xasan Guled Abtidon, isla dhamadki sanadkas ayuna dalkani ku biiray golaha Jamacada carabta, sida ku xusan documents-yada la hayo.
Dad badan ayaa shaki galinayay sida ay Jabuti ku noqon karto dowlad madax banan, waxaana loo badinayay in qowmiyadaha cafarta iyo Ciise ay ku dagalami doonaan hanaanka maamulka, maadama waqtigas isaga ah uu jiray dagaalki weyna ee 77, kaas oo u dhexeyey dowladaha Ethiopia iyo Somalia, balse ma dhaboobin baqdintaasi, Jabuutina waxa ay ku adkeysatay madax banaanideda.
Xukumadi Guuleed Abtidon waxaa soo food saaray caqabado dhowr ah, oo ay ugu muhimsan thy dagaladi ahliga ahaa ee ka dhex qarxay Cafarta iyo Ciisaha wada dago dalka Jabuti, kuwaas oo kukala aragti duwana hananka awod qeybsiga, balse cadaadisyo badan oo ay sameyen reer galbedka ayaa ku qasbay madaxweynaha inuu xilka RW siiyo qowmiyada cafarta, arinkaas oo ka qeyb qaatay in xiisada la qabojiyo.
Sanadki 1999ki, Ayuu Xasan Guled Abtidon shaaca ka qaaday in dalka lagu qabanayo Doorasho madax banan, balse isagu uusan iskusoo tagi doonin xilka madaxtinimada, Xizbigisa ayaana soo sharaxay Ismacil Cumar Gelle, Wazirki hore ee arimaha dibada ee xukumadisa iyo Wil uu madaxweyne Abtidoon ader u yhy, inkastoo uu doorashada kusoo baxay Ismacil Cumar Gelle, oo horey kaga tirsana hey,ada Sirdoonka, kaas o ilaa waqtigan gacan bir ah ku hayo wadankaasi.
Mareykanka ayaa saldhigisa ka dhistay dalkan Sanadki 2002da, xilligas oo ku began wax yar kadib marki ay dhecen weeraradi 11ka Sep, ee lagu burburiyey daarihi Manhattin, Saldhiga Limone ayaana kamid noqday goobaha qarsodiga ah ee dadka lagu tacdiibo, wuxuuna sidoo kale ahaa, halka ay ciidanka Mareykanku kagasoo duulaan wadanka MUslimka ah ee Somalia.
Sanadki 2008da, colaad ayaa Jabuuti iyo Eritrea soo kala dhex gashay, taas oo salka ku heysay mandiqada Buuraleyda ah ee Raas Damiira, Esseas Afawerki oo ah madaxweynaha kaligis taliska ah ee Xukumada Asmara ayaana mandiqada soo dhigay kumanan ciidanka ah, iska hor imadyadi dhacay ayayna ku dhinten dad gaaraya ilaa 30 ruux, halka kuwa kalena ay ku dhawacmen.
Dowlada Eritrea ayaa dhaleceyn xoogan kala kulantay gaalada caalamka, gaar ahaana midowga Yurub, Hey’ad Galedka QM iyo Jaamacada Carabta, golaha Amanka ayaana sanadki 2009ka, cunaqabateyn adag kusoo rogay xukumada Asmara, taas oo dhawantan laga dabciyey.
Bishi June sanadki 2010ka, ayay ciidanka Eritrea isaga bexen mandiqadi lagu muran sana, kadib in muda ah oo ay xoog ku maamulayen, xiriirka diplomasi ee u dhexeya labada dal ayaana dib loosoo nooleeyey sanadki 2018ka, kadib marki ay heshis nabaded kala saxiixden, kaas oo u garwaden ka ahaa RW dalka Ethiopia ninka lagu magacabo Abiy Axmed.
Tan iyo sanadki 1999ki, Ma jirin musharax ku dhiiraday inuu tartan daacad ah la galo Ismacil Cumar Gelle, waqti kasta oo la gaaro xilliga doorashada ayuuna soo abuubula doorasho been ah, halka sidoo kalena uu gacan bir ah ku hayo mucaaradka iyo muxaafidka intaba, taas oo u suurta galisay inuu Sanadihi 2004da, 2010ka, 2016ka iyo Sanadki lasoo dhaafayba ku guuleysto xilka madaxtinimada, mana jirin doorasho uu ku sigtay khasaare, midi ugu hooseysana waxa uu helay %80 codadki la tiriyey.
Ismacil cumar Gelle iyo Qoyskiisa ayaa gacan adag ku haya hanaanka maamulka, hadey thay dhaqalaha, siyaasada, arimaha bulshada iyo dhinaca warbahinta, dadka sida gaarka ah ula socda arimaha dalkan ayaana shegaya, in xaaska madaxweynaha ay ka amar weyntahay golayasha Wasiirada, halka wiilashiisana ay iyugu yihin, kuwa kaliya ee laga amar qaato wadankaasi.
Marka lagasoo tago siyaasada iyo Tarikhda Jabuuti, hadaba maxaa caasimada wadankaasi ka dhigay Caasimada Jawasista, taas oo la shegayo inay badal u noqotay magalada Berlin, halka warbahinta qaarna ay cinwan ka dhigten, Jabuuti waxa ay gabaad u noqotay jawasista caalamka.
Saxafi lagu magacabo Well Brown oo ka howl galaya Wargeyska Daily telegraph ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa warbixin kooban ka qoray xaalka dalka Jabuuti, wuxuuna carabka ku dhuftay in ciyaar adag oo dhanka sirdoonka ah ay ku dhex mareyso dalkan, wadamada Mareykanka iyo Shiinaha, kuwaas oo mid kasta uu doonayo inuu midka kale ka riixo awooda dadban ee u ku leeyahay gudaha wadankasi.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu tusaale usoo qaatay dalalki ay horey u caga dhigten Jawasista, wuxuuna yiri bilowgi qarniga 10aad, magalada Oslo ayaa aheyd xarunta Jawasista, Halka magalada Darul Beyda ee dalka Morocco lagu tartamayey sanadihi 1940 meeyadi, balse magalada Berlin ayaa aheyd caasimada Jawasista tan iyo 1950ki, maantana waxaa la waregtay dowlada Jabuuti oo ah dal yar oo African ah, taas oo aysan dadku wax badani ka aqoonin.
Qoraga ayaa yiri, Waqtigan la joogo gudaha Jabuuti oo Masaxo ahaan ku fadhisa 23Kun oo KM waxaa ku yaala 4 saldhig ciidan, kuwaas oo ay kala leeyihin dalal ay is diidan thy Masalixdooda, kuwaas oo kala ah Mareykanka, Shinaha, Japan iyo Faransiiska, dhaman saldhigyadan oo isku jira wax ka yar dhowr km ayaana ku wada yaala caasimada dalka, oo ah magalo xeebed ku dhirirsan Bada cas, kaabigana ku heysa Marinka biyoodka caalamiga ah ee Babul Mandab.
Tobanki sano ee lasoo dhaafay, ayay dowladan oo ay dadkeedu ka yar yihin 1 million uu ruux tusaale u noqotay Nidaamka caalamiga ah ee cusub, waxa ayna marti galisay Jawasista caalamka, gaar ahaana kuwii reer galbedka ee qadiimiga aha iyo Quwada Shiinaha oo ah mida hada soo koreysa.
Mar uu soo indha indheyey magaladu ayuu yiri, Arimo la yaab leh ayaan kusoo arkay caasimada Jabuuti, waayo mar aan booqday Hotel-ka Kambeniski ee ku yaala xeebta, waxaan kusoo arkay in badan oo kamid ah diplomasiyinta rer galbedka, qandaraslayal ciidan iyo Askar fara badan oo ku qaxweynaya, kuwaas oo xitaa Qamriga u cabaya si aan qarsoodi laheyn, tamashleyntuna u dheer thy, lkn wuxuu intaas raaciyey, inuusan goobta ku arag q qof oo shiines ah, haduu yhy askari ama sirdon intaba, arinkas oo sababtiisa la garan waayey.
Amniga Hotelka aad ayaa loo adkeyey, goob kastana waxaa taagan askar ilaalo ah, Kamiradaha muraqabada ayaana lagu rakibay 4tiisa jiho iyo dhaman dariqyada soo gala, qola kastaana waxa ay ku mashqulsan thy shirar gaar ah, waxaana la oran karaa buu yiri, halkan ayaa ah goobta lagu kala qaato xogaha xasaasiga ah, maadama ay ku sugan yihin diplomasiyin ka socda inta badan dalalka caalamka.
Mid kamid ah Diplomasiyinta ku sugan hotelka ayaa ka dhawajiyey, in qof kasta oo ku sugan gudaha Jabuuti la garanayo howsha uu ka hayo, mana ahan buu yiri dal lagu kala dhuman karo, balse wuxu intas ku daray, in qof kasta u ka shaqeynayo shirqolka midka kale, taas oo u ku tilmamay ciyaar heer calami ah, oo aad u xiisa badan.
Si guud ahaned amniga dalka ayuu shegay inay ka wada shaqeynayan Askarta dowlada iyo Kumanan kale oo ka kala socda wadamda Mareykanka, shiinaha, faransiiska, Japan, spain iyo Talyaniga, kuwaas oo ay kulmisay Maslaxada, halka siyaasiyinta caloshod u shaqeystayasha ahna ay ku tartamayan iib geynta dhulalka iyo Guryaha, kuwaas oo dalkan ka noqday kuwa ugu qiimaha badan, marka lagasoo tago xogaha sirdoon.
Reer galbedka ku sugan Jabuti ayaa ku jahawarersan joogitanka askarta u dhashay dalka Shinaha, kuwaas oo tiro ahaan gaaraya 10kun, balse la yaabka ugu badan ayaa ah inaaney kasoo bixin saldhigooda, kaas oo lagu wareejiyey Darbiyo Shub ah oo aysan Karin qaraxyadu, Silig wax gooya iyo gooba laga ilaaliyo, marka lagasoo tago leyrarka ka shidan gudaha saldhiga iyo Askarta ilaalada oo lagasoo arkayo banaanka hore, ayaana la mooda inay mandiqadani thy lama dagaan, mana arkeysid qof galaya ama kasoo baxaya saladhigasi.
Diplomasiga oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, Maalin kasto ayaan soo hor mara saldhiga ciidanka Shiinaha, umana maleynayo inaan hal mar xitaa arkay qof galaya ama kasoo baxaya saldhigasi, xaqiiqdi ma garaneyno waxa ay goobtan ka hayaan iyo hadafka ay dowlada shiinaha ka leedahay, qarsoodiga sidaasi u balaaran.
Well Brown oo ah qoraga warbixinta ayaa yiri, Xukumada Beijing waxa ay Jabuuti ka hir galisay dakad calami ah, oo ay ku ilaashato ganacsigeda qaarada Africa, kaas oo lacagta kasoo xaroota sanad waliba ay kor u dhaafeyso ilaa 250 million oo dollar, hadafka loo furay saldhigan ayaana ahaa, muujinta awooda ay ku leedahay mandiqada, Sanadki 2017ka ayaana xariga laga jaray saldhigaasi, inkastoo dib laga balaariyey, lagana mid ay xitaa kusoo xiran karaan marakibta diyaarada qaada.
Isku dhawanshaha saldhiga Mareykanka iyo Kan Shinaha ayaa lagusoo waramaya inuu marar badan dhaliyey muran diplomasiyaded oo u dhexeya Washington iyo Beijing, balse sanadki 2018ka, ayay labada dhinac ku sigten isku dhac toos ah, kadib marki ay hawada saldhiga kusoo dhawatay diyaarad uu leeyahay military-ga mareykanka, kaas oo Sarakisha ka howl gala saldhiga ciidanka SHinaha ku qasbay inay u adegsadan Leyzar, si aaney u arag waxa ka soconaya gudaha saldhigasi.
Isticmalki leyzarka ee kadhanka ah diyaradaha Mareykanka ayaa sababay, burburka mid kamid ah diyaaradaha ugu qaalisan ee uu isticmalo Pentagon-ka iyo diyaarado kale oo Helicoptero ah, Talista Africom ayaana isla xiligasi amar ku bixiyey joojinta dhamanba duulimadyadi ay ka sameyn jiren wadanka Jabuuti, si loo ogaado sababta keentay arinkasi.
Gaba gabadi qoralka ayaa lagu yiri, waa ay iska cadahay waxa ka soconaya Jabuuti iyo qorshayalka dhagarta ah ee lagu malegayo, wuxuuna tusaale usoo qaatay joogitanka ciidanka Japan, kuwaas oo ku gabanaya la dagalanka waxa ay ugu yeeraan burcad badeeda Somalida, balse xaqiiqdu waa ay ka duwan thy sidan, qorshaha ugu weyn ee ay u joogaan bariga qaarada Africa ayaana ah, la socodka dhaqdhaqaqa shiinaha, maadama uu maran ku saabsan madax banaanida uu kala dhexeyo xukumada Beijing.
In wax laga ogaado howlaha rasmiga ah ee ay Jawasistu ka hayan gudaha Jabuuti ma ahan mid sahlan, balse marka aad fiiriso muuqaalka kore, waxaa kuuso baxaya ahmiyada uu leeyhy dalkan, madama dhanka woqoyi uu ka saran yhy dalka Eritrea, dhanka galbedna Ethiopia oo ay ka soconayan dagaalo ahli ah, halka dhanka barina ay ka saarantahy Somalia oo ah dowlad fashilantay, taas oo ay sii dhertahay in dhanka woqoyi bari uu ka saran thy wadanka Yemen, halkaas oo isbaheysiga carabta ee ay hogamineyso dowlada Sucudiga uu ka wado howl gal lagula dirirayo Maleshiyadka Xuthiyinta, kaas oo soo socday tan iyo sanadki 2015ka.
4ta jiho ee dalka Jabuuti waxaa ka taagan qalalaso siyaasaded, wuxuuna leeyahy xeeb dheer o ku teedsan Bada cas, sidoo kalena wuxuu dhowr Km oo qura u jiraa marin biyoodka Babul Mandab, halkaas oo ay ka gudban badecadaha caalamka, halka sidoo kalena marinkan loo isticmaalo, kala gudbinta hubka iyo Maandooriyaha loo tahriibinayo Yurub iyo Mandiqada ay xasaraduhu ka taagan yihin.
Sidoo kale dowlada Jabuuti ee uu hogamiyo Ismacil Cumar Gelle, ayaa xubin ka ah midowga Africa ee duulaanka kusoo qaaday dhulka Muslimka ah ee Somalia, Askar Jabuutiyan ah oo ka socda dowladan ayaana ku sugan gobolada dhexe, kuwaas oo hadafkooda uu yhy la dagalanka sharecada iyo in dalkan muslimka ah laga hirgaliyo waxa ay ugu yeeraan dimuquradiyada, iyagoo ka shidaal qaadanaya gumeystaha gaamuray ee wali gacanta ku hya magalada madaxda wadankaasi.
Halkaan Ka Dhageyso Warbixin Sidee Ayay Jabuuti Isugu Badashay Caasimadda Jawaasiista